SPORTS: Cristiano Ronaldo oo laga helay Cudurka Karoona Fayras (Covid-19) – HalQaran.com
SPORTS: Cristiano Ronaldo oo laga helay Cudurka Karoona Fayras (Covid-19)
SPORTS (Halqaran.com) – Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la xaqiijiyay in laga helay Cudurka Karoona Fayras (Covid-19), xilli uu ku suganyahay waajibaadka xulka Qarankiisa ee Portugal.
Xiddiga 35 jirka ah ee weerarka uga ciyaara kooxda Juventus ayaa isku diyaarinayay in uu xulka Qarankiisa ku wajaho Sweden, kulan ka tirsan UEFA Nations League.
Ronaldo ayaa la sheegayaa in uuna lahayn wax calaamado ah oo muujinaya xanuunka.
‘‘Cristiano Ronaldo waxaa laga fasaxay shaqada xulka qaranka kaddib markii laga helay cudurka Covid-19, sidaasi darteed ma wajahi doono Sweden.”ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay xiriirka kubbada cagta ee Portugal.
“Xiddiga reer Portugal aad ayuu u fiican yahay, wax calaamo ah kama muuqdaan, wuxuuna ku jiraa karantiil.” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xiriirka kubbada cagta ee Portugal.
Tababare Fernando Santos ayaa yiri, “Kadib markii Cristiano Ronaldo laga helay, waxaa iyagana baaris cusub lagu sameeyay ciyaartoyda kale saaka oo Talaado aheyd, mana jiro ciyaaryahan kale oo laga helay, iyagoo diyaar u ah tababarka”.
Tags: Cudurka Koroona, Karantiil, Tababare Fernando Santos, Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo